CHID Bank – Construction, Housing & Infrastructure development bank
Address: No.60, Shwedagon Pagoda Road,
Nawaday St,Yawmingyi Ward, Yangon, Myanmar
Free call: 09-790115565
All INTERNATIONAL BANKING DEVELOPMENT BANKING PERSONAL BANKING COPORATE BANKING DIGITAL BANKING
ATM CARD SERVIC...
Under the supervision of the Ministry of Construction, the Construction and Housing Devel...
© 2020 All Rights Reserved by CHID Bank
USD, EURO, SGD Currency များအား အရောင်းအဝယ်ဆောင်ရွက်ပေးလျှက်ရှိပါသည်။
Money Changer Location
Money Changer, Dagon Branch
>No.60, Shwedagon Pagoda Road, Yaw Min Gyi Quarter, Dagon Township, Yangon
Money Changer, Botahtaung Branch
>No.228/234, Boghoke Road, Botahtaung Townsip, Yangon
Money Changer, Shwe Pauk Kan Branch
>Building No.18, Room No.004, Kone Baung Road,(14) Ward, Shwe Pauk Kan Myo Thit, Yangon
Money Changer, Mandalay Branch
>No.218, 27th Street, Between 82nd & 83rd Street, Chan Aye Thar Zan Township, Mandalay
နိုင်ငံတကာဘဏ်လုပ်ငန်းများအား ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် CHID Bank အနေဖြင့်
နိုင်ငံတကာတွင် အဆက်အသွယ်ဘဏ်များထူထောင်ခြင်း၊ SWIFT RMA (Relationship Management
Alliance) ထူထောင်ခြင်း၊ Nostro ငွေစာရင်းများဖွင့်လှစ်ခြင်းများ ဆောင်ရွက်ထားရှိပါသည်။
Correspondent and RMA of IBD
BANK COMMISION & CHARGES
နိုင်ငံတကာဘဏ်လုပ်ငန်းဌာန၏ ဝန်ဆောင်မှုနှုန်းထား/ သတ်မှတ်ချက်များ ဖြစ်ပါသည်။
IBD Bank Commission & Charges
L/C, Bank Guarantee, Tarde Payment များအတွက် Collateral Basis ဖြင့် Financing Facility ထုတ်ပေးခြင်းများလည်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
Collateral basic L/C Issuances and Bill Payment
Collateral basic B/G Issuances
Collateral basic T.T Payments
CHECK LIST OF COLLATERAL LOAN APPLICATION
နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြုဆောင်ရွက်နေသော L/C, Bank Guarantee, Trade Payment များအတွက် ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
Required Documents Application Letter LC Form (Bank Form) Import License/ None License Bank Commission ( 0.25% of LC Amount or USD-50/- for3Months part thereof )
Check List for Trade Finance
LC Application Letter
LC Form of CHID Bank (1)
LC Form of CHID Bank (2)
LC Form of CHID Bank (3)
Required Documents Bank Form Application Letter Import / Export License Bank Commission (USD-50/- per Bill, Discrepancy Fees USD-60/-)
CHID Bank TT Tha Ka Form
CHID Bank TT Tha Ka Form (Back Page)
Required Documents Application Letter Government/ Authority Letter Proposed Guarantee Format Bank Commission ( 0.25% of LC Amount or USD-50/- for3Months part thereof )
Required Documents Application Letter Bill of Lading/ Import Declaration Bank Commission ( USD-10/- or MMK )
Cover Letter for Inward Remittance
Required Documents Bank Application Form Application Letter Bill of Lading/ Import Declaration Commercial Invoice Bank Commission ( 0.125% of TT Amount or USD-25/- part thereof )
Cover Letter for Outward Remittance
CHID Bank TT Form
နိုင်ငံခြားငွေစာရင်းသည်နိုင်ငံခြားငွေဖြင့် ကိုင်ဆောင်လှည့်လည်သုံးစွဲလျက်ရှိသော လူပုဂ္ဂိုလ်
အဖွဲ့အစည်း၊ ကုမ္ပဏီများအတွက် USD, EUR, SGD ငွေကြေးများဖြင့် Current Account ဖွင့်လှစ် ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။
Individual and Joint Account A/C Opening
Required Documents Bank Forms ( for Authorized Signatories and KYC ) Application Letter R.C Copy (or) Passport Copy Two copies Photo ( Passport Size) Initial Deposit (USD/EURO/SGD- 100/-)
Account Opening (Individual) Back
Account Opening (JV)
Account Opening (JV) Back
Check List For Account Open
Company A/C Opening
Required Documents Bank Forms ( for Authorized Signatories and KYC ) Application Letter with Company Letter Head Board of Directors’ Meeting Resolution Certificate of Incorporation/Export-Import Registration Memorandum of Association & Article of Association/Form (E ) R.C Copy (or) Passport Copy of Authorized Persons Two Photo of Authorized Persons (Passport Size) Initial Deposit (USD/EURO/SGD – 100/-)
Account Opening Metting Resolution Sample
FC Account Open Application Sample ( Eng )
FC Account Open Meeting Resolution Sample ( Eng )
Account opening (Company)
Account opening (Company) Back Page
INGO/NGO/Officials/Joint Venture A/C Opening
Required Documents Bank Forms ( for Authorized Signatories and KYC ) Application Letter with Organization Letter Head (Company Seal/ Designation Seal) Registration Letter of Concerned Ministry/ Authority BOD Lists/Memorandum of Association & Article of Association Board of Directors’ Meeting Resolution R.C Copy (or) Passport Copy of Authorized Persons Two Copies of Authorized Persons(Passport Size) Initial Deposit (USD/EURO/SGD – 100/-) Company Seal/ Designation Seal
Myanmar Payment Union is committed to improving the current financial system in Myanmar. MPU isajoint venture with the 28 member banks of MPU to facilitate public payments and reduce the use of banknotes.
MPU Debit Card is an account that is used to open an account at member banks and withdraw cash at ATMs of member banks when needed. Shopping centers;
Shopping malls Pay with POS (Point Of Sale) machines at stores. If you have an MPU E-Commerce Account, it isadebit card that can be used to make payments
online easily through the MPU Network.
MPU Debit Card Opening
Customer applied Card Account with NRC (National Register of Citizens).
Account can be opened as individual.
Initial deposit (10,000 / -) can be opened.
Applicant must be aged 18 years or over.
Applicant need to bring his/her National Identity Card.
The maximum initial deposit is MMK – 10,000
CHID Card isaDebit Card type.
ATM card holder must be added (deposit) enough money to your card account to withdraw.
Applicant can reload money to your card at any CHID Bank branch.
Cash withdraw 24/7 any ATM
Transfer cash each other between CHID Card Holders 24/7 at CHID Bank ATM
ATM Password change at CHID Bank ATM
Getting bank statement
If you want to apply your card lost or yours damage(user fault), you must pay MMK – 3000 to bank.
For one transaction, minimum 1,000 and maximum up to 300,000 per account.
Maximum up to 1 Million per account daily.
Maximum up to5Million per account daily for POS.
Please keep your ATM Card inasafe place, destroy the original printed copy of the PIN and memorize your PIN and change it.
Please do not allow anyone else to use your ATM Card or PIN.
If you’ve been lost your ATM Card, you must inform to the Bank immediately.
You should promptly report any notice or suspicion loss, theft, disclosure or unauthorized use of your ATM Card and PIN by calling our ATM Card service (CHID Bank) at 01-380822.
HOUSING SAVINGS DEPOSIT ACCOUNT
You can open the Housing Savings Deposit A/C at least 10,000/- with identified card.
You can open the Housing Savings Deposit A/C at any branches of CHID Bank.
You can open spritely both of the Housing Savings Deposit and Savings Deposit A/C.
According to the opening type Savings deposits A/C, you can open housing deposit A/C, Individual (or) Joint A/C. The Housing Deposit will also get (8.25%) interest for per year.
If you’re had to come our branches for the purpose of Savings Deposit into your account, you can remit cash from relative banks such as KBZ,AYA,AGD,MCB,GTB , NSB.
If you want to withdraw cash, from your Housing Deposit A/C, you can do it,according to the rules and regulations of Savings Deposits A/C.
If you will withdraw cash from Housing Deposit A/C, it can cause you to occur decrease incredibility and exclude including opporatulities in favourite lists.
CHID will issue to DUHD as the detail data of Housing Deposit A/C list, saving amount and saving progressive trend.
Downpayment (30% to 50%) of housing value to the Bank by opening Current Account in Bank. Service charges (1%) of housing value.
You can apply loan period up to the most (8)years or you can get under (8)years loan period if your monthly payment is suitable.
Interest is (10%) in one year on your loan anount.
Loan Principle and Interest Paying Process
According to the Loan Period ,interest and principle monthly installment (Eg., 8years(96 months)(96 times)).So,monthly payment is equal and then you pay set amount each month,you’ll have paid off both interest and principle when the end of your loan term.
Calculating interest with Amortizing Method used in international home loan.
This loan is calculate interest on your rest of principle of monthly payment.
You must give monthly payment at the first week of every month without absenting , if not Bank collects late fee(0.04%) in one day if over identified date.
If your payment absent (4 months) (4 times) continuously, the bank beg off your apartment.
Before paid off your loan, you must have fire insurance yearly and borrowers give premier charges.
တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့များ၏ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် တင်ဒါအောင်မြင်သူလုပ်ငန်းရှင် များ၊ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာတွင် စာချုပ်ပါသတ်မှတ်ချက်များအရ လုပ်ငန်းပြီးစီးမှုအပေါ်အခြေခံ၍ လုပ်ငန်း တန်ဖိုးထုတ်ယူရသဖြင့် လုပ်ငန်းရာခိုင်နှုန်းပြီးစီးရန်လိုအပ်သော လုပ်ငန်းသုံးငွေပမာဏတစ်ခုအား ကြားခံထုတ် ပေးခြင်းနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ၊ ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများ ချောမွေ့စွာဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ချေးငွေထုတ်ချေးပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။
အတိုးနှုန်းမှာ တစ်နှစ်လျှင် (၁၁%) မှ (၁၃%)အထိ ဖြစ်ပြီး၊ ချေးငွေသက်တမ်းမှာ တင်ဒါလုပ်ငန်းစာချုပ်ပါ အတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
ချေးငွေပမာဏသတ်မှတ်ချက်မှာ လုပ်ငန်းပြီးစီးမှုအလိုက်လုပ်ငန်းတန်ဖိုး၏ (၁၀%)မှ (၄၀%)ထိလည်းကောင်း၊ တင်ဒါအပ်နှံသူဌာနမှ တာဝန်ယူမှုအပေါ်အခြေပြု၍သော်လည်းကောင်း၊ လုပ်ငန်းသဘာဝအပေါ်အခြေခံ၍ လည်းကောင်း ချေးငွေရယူနိုင်ပါသည်။
ကုမ္ပဏီ Letter Head ဖြင့် ချေးငွေလျှောက်လွှာ( ဒါရိုက်တာအဖွဲ့က တာဝန်ပေးအပ်ထားသည့် ကုမ္ပဏီ ဥက္ကဌနှင့် ဒါရိုက်တာတစ်ဦး လက်မှတ်ရေးထိုးရန်)။
ချေးငွေလျှောက်လွှာတွင် လက်မှတ်ရေးထိုးသည့် ကုမ္ပဏီအကြီးအကဲနှင့် ဒါရိုက်တာ၏ နိုင်ငံသားစိစစ် ရေးကတ်ပြား(မိတ္တူ)၊ အိမ်ထောင်စုစာရင်း(မိတ္တူ)။
သက်တမ်းရှိ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်၊ Form(6)၊ Form(26)၊ Form(E)၊ သင်းဖွဲ့စည်းမျဉ်း၊ သင်းဖွဲ့မှတ်တမ်း (သို့မဟုတ်) Myanmar Company Online(DICA) နှင့် ကုမ္ပဏီဒါရိုက်တာအဖွဲ့ အစည်း အဝေးဆုံးဖြတ်ချက်မှတ်တမ်း။ (ကုမ္ပဏီ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်မှတ်တမ်းတွင် တင်ဒါ ချေးငွေရယူရန်နှင့် ငွေထုတ်သူအရာရှိအဖြစ်တာဝန်ပေးအပ်ကြောင်း၊ တင်ဒါလုပ်ငန်းအတွက် ဌာနမှ ငွေပေးချေ သည့်အခါ မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်ရှိ ဆောက်လုပ်ရေး၊ အိမ်ရာနှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်၏ စာရင်းရှင်စာရင်းသို့ ဌာနအား Endorsement ဖြင့် ပေးသွင်းစေမည်ဖြစ်ကြောင်း ဆုံးဖြတ်ချက်မှတ်တမ်း ပါရှိရမည်ဖြစ်ပါသည်။) အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်မှတ်တမ်း။
အခြားဘဏ်များတွင် ယခုလျှောက်ထားသော တင်ဒါလုပ်ငန်းအတွက် ချေးငွေရယူထားခြင်းမရှိပါ ကြောင်း ၊ ကုမ္ပဏီ Letter Head ဖြင့် ခံဝန်ကတိစာ။ (ကုမ္ပဏီဥက္ကဌနှင့် ဒါရိုက်တာတစ်ဦး လက်မှတ်ရေးထိုး ရန်။)
တင်ဒါလုပ်ငန်းအား Sub-Contract ပေး၍ ဆောင်ရွက်ထားခြင်းမရှိပါကြောင်း ကုမ္ပဏီ Letter Head ဖြင့် ခံဝန်ကတိစာ။ (ကုမ္ပဏီဥက္ကဌနှင့် ဒါရိုက်တာတစ်ဦး လက်မှတ်ရေးထိုးရန်။)
တင်ဒါလုပ်ငန်းအပ်နှံသူနှင့် တရားဝင်ချုပ်ဆိုထားသော သက်တမ်းရှိ လုပ်ငန်းသဘောတူစာချုပ် (မိတ္တူ) (မူရင်းပူးတွဲတင်ပြရန်။) (တင်ဒါလုပ်ငန်းစာချုပ်သက်တမ်းကျော်လွန်နေပါက စာချုပ်သက်တမ်းတိုးမြှင့် ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုကြောင်း ဌာနထောက်ခံချက် မူရင်းပူးတွဲတင်ပြရမည်ဖြစ်ပါသည်။)
CHIDBank မှထုတ်ပေးထားသော Performance Guarantee (မိတ္တူ)။ (က) တင်ဒါလုပ်ငန်းအတွက် Performance Guarantee အား CHIDဘဏ်ခွဲများတွင်သာ ထားရှိပါက Call Deposit အတိုးနှုန်းအတိုင်း (၆%)ရရှိပါမည်။ (ခ) CHIDBank PG ဖြင့် တင်ဒါချေးငွေရယူပါက အတိုးနှုန်း(၁၁%)ဖြစ်ပြီး၊ Other Bank PG ဖြင့် တင်ဒါချေးငွေရယူပါက အတိုးနှုန်း(၁၃%)ဖြစ်ပါသည်။
တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် MCEA အသင်းဝင်လက်မှတ် (မိတ္တူ)။ (မူရင်းပူးတွဲတင်ပြရန်)
Withholding Tax, Commercial Tax နှင့် Income Tax ပြေစာမိတ္တူများ။
လက်ရှိလုပ်ငန်းပြီးစီးမှု (Update)မှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံများ ပူးတွဲတင်ပြရမည်ဖြစ်ပါသည်။
ကုမ္ပဏီတစ်ခုလျှင် လုပ်ငန်းတန်ဖိုးမတူညီသော တင်ဒါဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း(၃)ခုထိအတွက်သာ ချေးငွေလျှောက်ထားခွင့်ပြုမည်ဖြစ်ပါသည်။
ချေးငွေရယူမည့်ကုမ္ပဏီသည် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်မှုသက်တမ်းအနည်းဆုံး(၁)နှစ် ရရှိ မည်ဖြစ်ပါသည်။
တင်ဒါလုပ်ငန်းအတွက်ပေးချေငွေများကို မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်ခွဲရှိ ဆောက်လုပ်ရေး၊ အိမ်ရာနှင့် အခြေခံအဆောက်အအုံဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်၏ စာရင်းရှင်စာရင်းသို့ ငွေချေးယူသူ ကုမ္ပဏီမှ Endorsement ဖြင့် ပေးသွင်းစေရေး ဆောက်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး၊ ငွေပေးချေသည့်အခါတိုင်း ဘဏ်သို့ အကြောင်းကြားပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း လုပ်ငန်းအပ်နှံသူ (သို့မဟုတ်) လုပ်ငန်းတန်ဖိုးငွေ ထုတ်ပေးပိုင်ခွင့်ရှိသည့် သက်ဆိုင်ရာဦးစီးဌာန ထောက်ခံချက်။ (ပူးတွဲထောက်ခံချက်ပုံစံဖြင့် တင်ပြရန်ဖြစ်ပါသည်။)
လက်ရှိလုပ်ငန်းပြီးစီးမှုမှန်ကန်ကြောင်း လုပ်ငန်းအပ်နှံသူ (သို့မဟုတ်) လုပ်ငန်းတန်ဖိုးငွေ ထုတ်ပေးပိုင် ခွင့်ရှိသည့် သက်ဆိုင်ရာဦးစီးဌာနထောက်ခံချက်။ (ပူးတွဲထောက်ခံချက်ပုံစံဖြင့် တင်ပြရန် ဖြစ်ပါ သည်။)
သက်ဆိုင်ရာမြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်ခွဲရှိ ဆောက်လုပ်ရေး၊ အိမ်ရာနှင့် အခြေခံအဆောက်အအုံဖွံ့ဖြိုးရေး ဘဏ်၏ စာရင်းရှင်စာရင်းသို့ ဌာနမှ Endorsement ဖြင့် ပေးချေသည့်ငွေဝင်ရောက်လာပါက ဘဏ်အနေဖြင့် ချေးငွေပမာဏအား နှုတ်ယူထား၍ ပိုငွေအား ကုမ္ပဏီသို့ (၂)ရက်အတွင်း ပြန်လည်လွှဲပြောင်း ထုတ်ပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။
တင်ဒါချေးငွေရရှိပါက သြဒီမန်စာချုပ် (Promissory Note-Pronote) တွင်- (က) လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအနေဖြင့် ချေးငွေရယူပါက ဇနီးနှင့်ခင်ပွန်း ပူးတွဲလက်မှတ်ရေးထိုးရန် ၊ အိမ်ထောင်မရှိသူ ဖြစ်ပါက ဥပဒေအရအမွေဆက်ခံပိုင်ခွင့်တစ်ဦးတို့ ပူးတွဲလက်မှတ်ရေးထိုးရန်။ (ခ) ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါက ကုမ္ပဏီဒါရိုက်တာအဖွဲ့၏ အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်အရ တာဝန်ပေးအပ်သော ဥက္ကဌ နှင့် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင် ကိုယ်စားလှယ်(၁)ဦး လက်မှတ်ရေးထိုးရန်။
ခွင့်ပြုထုတ်ချေးမည့် ချေးငွေ(%)နှင့် ပြန်လည်ပေးဆပ်ရမည့်အစီအစဉ်မှာ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။ (က) လုပ်ငန်း(၁၀%)ပြီးစီးပါက ချေးငွေ(၂၅%) ခွင့်ပြုထုတ်ချေးမည်ဖြစ်ပြီး၊ ဌာနမှ တတိယအရစ်(၂၅%) ခွင့်ပြုထုတ်ချေးမည်ဖြစ်ပြီး၊ ဌာနမှ တတိယအရစ်(၂၅%)ထုတ်ပေးချိန်တွင် ပြေကြေစွာပေးဆပ်ရန်။ (ခ) လုပ်ငန်း(၂၅%)ပြီးစီးသော်လည်း၊ ဌာနမှငွေထုတ်ပေးခြင်း မရှိသေးပါက (၂၅%)မှ (၄၀%)အထိ လုပ်ငန်းပြီးစီးမှုထောက်ခံချက်အတိုင်း ချေးငွေခွင့်ပြု ထုတ်ချေးမည်ဖြစ်ပြီး၊ ဌာနမှ တတိယအရစ် (၂၅%) ထုတ်ပေးချိန်တွင် ပြေကြေစွာပေးဆပ်ရန်။ (ဂ) လုပ်ငန်း(၂၅%)နှင့်အထက် ပြီးစီးသော်လည်း၊ ဌာနမှ ငွေထုတ်ပေးခြင်းမရှိသေးပါက (၂၅%)မှ (၄၀%)အထိ လုပ်ငန်းပြီးစီးမှုထောက်ခံချက်အတိုင်း ချေးငွေခွင့်ပြုထုတ်ချေးမည်ဖြစ်ပြီး၊ ဌာနမှ ဒုတိယအရစ် (၂၅%) အတွက် ငွေထုတ်ပေးချိန်တွင် ချေးငွေ၏ (၅၀%)နှင့် ဌာနမှ တတိယအရစ် (၂၅%)အတွက် ငွေထုတ်ပေးချိန်တွင် ချေးငွေ၏ (၅၀%) အပြေအကြေပေးဆပ်ရန်။
ကျသင့်အတိုးငွေများအား ဘဏ်မှချမှတ်ထားသည့်မူအရ ချေးငွေမပြေကြေမီအထိ (၃)လတစ်ကြိမ် သတ်မှတ်ကာလတွင် မပျက်မကွက် ပေးသွင်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။
ချေးငွေသက်တမ်းအား တင်ဒါလုပ်ငန်းသဘောတူစာချုပ်သက်တမ်းအတိုင်း သတ်မှတ်ခွင့်ပြု ထုတ် ချေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
ချေးငွေများကို တင်ဒါအောင်မြင်သည့် သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်များရှိ အနီးစပ်ဆုံး CHID ဘဏ်ခွဲများတွင် စာရင်းရှင်စာရင်းဖွင့်လှစ်ပြီး လျှောက်ထားရန်ဖြစ်ပါသည်။
can open Individual, Join, Organization or Companies account.
the interest rate is (5.25%)per annum and the interest amount is added to your account every three month
Collapsible Group Item #2 reprehenderit, enim eiusmod high life accusamus terry richardson ad squid.3wolf moon officia aute, non cupidatat skateboard dolor brunch. Food truck quinoa nesciunt laborum eiusmod. Brunch3wolf moon tempor, sunt aliqua putabird on it squid single-origin coffee nulla assumenda shoreditch et. Nihil anim keffiyeh helvetica, craft beer labore wes anderson cred nesciunt sapiente ea proident. Ad vegan excepteur butcher vice lomo. Leggings occaecat craft beer farm-to-table, raw denim aesthetic synth nesciunt you probably haven't heard of them accusamus labore sustainable VHS.